China B Series Auto-body Alignment Bench mpanamboatra sy mpamatsy | MIT
Fananganana tsanganana mavesatra
Fitaovana mavesatra ho an'ny adidy mavesatra
Bench fanamboarana fiara mifandona
Rafitra fandrefesana elektronika
Rafitra fanintonana dent + milina fanamafisana
Fananganana sehatra mavesatra
B Series Bench Fanitsiana vatana
Modely tsy misy tariby
Rafitra fanaraha-maso afovoany mahaleo tena: ny tahony iray dia afaka mampiakatra sy midina sehatra, misintona tilikambo miendrika hidradradradrana miantoka ny 360 ° mihodina. Varingarina mitsangana manome manintona mahery tsy misy hery singa. Haavo miasa isan-karazany (375 ~ 1020mm) dia mety amin'ny mpandraharaha isan-karazany.
* Rafitra fanaraha-maso afovoany mahaleo tena: ny tahony iray dia afaka mampiakatra sy midina lampihazo, misintona tilikambo miendrika hidradradradrana miantoka ny 360 ° mihodina. Varingarina mitsangana manome manintona mahery tsy misy hery singa. Haavo miasa isan-karazany (375 ~ 1020mm) dia mety amin'ny mpandraharaha isan-karazany. ary ny fananganana faharoa. Mora miasa sy mahomby izy io.
* Ny platform dia afaka miakatra ambony sy midina miakatra ary miakatra ihany koa, izay miantoka ny karazan'ireo fiara tsy mataho-dalàna hidina sy hivoaka amin'ny lampihazo tsy misy mpitoha. Haavo miasa isan-karazany (375 ~ 1020mm) dia mety amin'ny mpandraharaha isan-karazany.
* Ampiasaina amin'ny clamp T-top tsara indrindra eto an-tany, fametrahana sy fametahana fiara haingana sy tery. Rafitra fandrefesana maro no tsy voatery.
* Chains rojo maharitra 12 miantoka ny tanjaka sy fiarovana avo lenta.
* Fitaovana misintona Mo-clamp, nafarana avy any Etazonia, dia tsy voatery, izay mifanaraka amin'ny karazana fampifanarahana.
* Ny rafitra fanaraha-maso afovoany voafehy tanteraka dia miantoka ny herin'ny hery, ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany.
* Ny kodiarana miorina dia mamindra mora foana ireo tilikambo. Stiffener ao anaty mpantsarika misarika azy io dia mahatonga azy io ho mafy orina sy maharitra.
* Ny fanamafisana fanampiny ao anaty sehatra dia miantoka ny faharetana maharitra. Ny rafitra fandrefesana herinaratra isan-karazany dia mifanaraka, mahatonga ny sehatra ho azo ampiharina kokoa.
* Mampitombo ny habaka fandidiana ny andry mihetsika.
Ny halavan'ny lampihazo
Ny sakan'ny lampihazo
Max. Manovo hery (tilikambo)
Herin'ny paompy elektrika
Modely azo ampiharina
Kilasy B / kilasy C / SUV / MPV
Manaraka: M Serires Bench Fanitsiana vatana
M Serires Bench Fanitsiana vatana
M1000 Series Auto-body Alignment Bench
Fampirantiana Alemanina 2018
1151 West 5th Street, Azusa, CA 91702, Etazonia